Nhau - Iyo Kambani Inoitisa Yekugara Hutano Dzidzo uye Kudzidziswa
Iyo Kambani Inoita Yekugara Hutano Dzidzo uye Kudzidziswa
Nekuda kwekusimudzira ruzivo rwevashandi nezve hutano hwevashandi uye kukurudzira ruzivo pamusoro pekudzivirira chirwere chebasa, zvinoenderana ne2020 yekudzidzisa kuchengetedzeka, kambani yakaparura dingindira rehutano hwevashandi nemusoro wenyaya we "Kuchengeta Hutano hweVashandi uye Kubatsira Hutano China" mu imba yemisangano 312 mangwanani aZvita 9. Nhengo dzemakambani emakambani ekuchengetedza, nhengo dzehofisi yekuchengetedza, epakati-epakati anotungamira makadhi, vatungamiriri vemahofisi, vanogamuchira vanyajambwa uye nevamwe vashandi vatsva vakapinda muchidzidzo ichi.
Iyi kambani inodzidzisa yakakoka mudzidzisi Ling Yujing kubva kuSichuan Chiteshi cheChengetedzo uye Hutano Dzidzo Center kuti ape hurukuro pane-saiti. Munguva yekudzidziswa, Mudzidzisi Ling akashandisa huwandu hukuru hwemifananidzo, zviitiko chaizvo nemavhidhiyo kuti aparidze zvakajeka uye zvakajeka zvirimo zvezvinhu zvitatu: Chekutanga, ruzivo rwekununurwa kwechimbichimbi, kusanganisira ruzivo rweCPR pane-saiti cardiopulmonary kumutsidzira, cerebral hemorrhage (cerebral stroke), uye pfari. Yekutanga nzira dzekubatsira dzezvirwere, myocardial infarction, zvakajairika hemostasis nzira uye Heimlich yekutanga rubatsiro nzira; yechipiri kuunza mararamiro ane hutano, anosanganisira kudya zvine mutsindo, kurovedza muviri kwakakodzera, kudzora kuputa nedoro, kusagadzikana kwepfungwa, kurara zvakakwana, nezvimwe. Chechitatu ndechekutsanangura kudzivirira pamwe nekuvandudza kwezvakajairika zvirwere zvepamabasa, kusanganisira kudzivirira pamwe nekurapa kwehypertension, fudzi rakagwamba nechando, cervical spondylosis, nezvimwewo, uye nekuzivisa ruzivo rwekuchengetedza hutano hwemapoinzi e meridian. Panzvimbo yekudzidzira, Mudzidzisi Ling Yujing akashanda nesimba nevadzidzi uye vakaita kuratidzira kuri kurarama, kwakagamuchira mhinduro inodziya kubva kune wese munhu. Iyo-nehafu-awa-yeawa basa rekudzidzisa hutano hwakapfuma mune zvemukati, nemifananidzo yakapfuma uye zvinyorwa, uye nzvimbo yekudzidza inoita kugomera kunoshamisa uye mhinduro kumibvunzo nguva nenguva. Kubudikidza nekudzidziswa uku, kwete chete ruzivo rwehutano hwevadzidzi rwakakwidziridzwa, asi zvakare munhu wese akaona kuti vanofanirwa kutarisisa zvakanyanya kumatambudziko avo ehutano uye kuchengetedza "shanduko huru".
Kugadzira nharaunda inoshanda ine hutano, yakachengeteka, inoenderana uye yakagadzikana, uye kuchengetedza hutano hwevashandi ibasa rezvemagariro. Dzidzo yekambani yehutano yehutano nekudzidziswa zvakaita basa rakanaka mukusimudzira kuziva kwevashandi -kuzvidzivirira, kuona hutano hwavo hwepanyama uye hwepfungwa, uye nekudzivirira zvinodzivirira zvirwere zvebasa.
Post nguva: May-01-2020
Horo Mhedzisiro Ino Sensor, Horo Yemazuva Ano Sensor, Yakaderera Simba Kudya Dc Yazvino Sensor, Horo Mhedzisiro Ac Yemazvino Sensor, Voltage Yazvino Sensor, Yakakwira Kurongeka Ac Ino Sensor,